အပြုအမူစွဲစွဲလမ်းစေသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ - အင်တာနက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အခြားပြIssနာများ။ မာ့ခ်ဂရစ်ဖစ်ပါရဂူဘွဲ့ (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည်порноတွင်
အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုနှင့်အခြားကိစ္စများ: တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ မာကု Griffiths ကပါရဂူဘွဲ့။ , (2016)
comments: ဒီအပေါ်မာကု Griffiths ကဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါသည် "တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive သင့်တယ်? (2016)"Kraus, Voon & Potenza အားဖြင့်။ ဂရစ်ဖစ်၏အဓိကအချက်များမှာ
ပိုများသောအလေးပေး CSB အတွက်အင်တာနက်အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ထားရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ (YBOP သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းခြင်းကို“ လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ခွဲခြားထားရမည်။")
အင်တာနက်ကိုတစ်ဦးချင်းအော့ဖ်လိုင်းမြားတှငျပါဝငျခွငျးစိတ်ကူးဘယ်တော့မှမယ်လို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ (ယနေ့ကျဘာစွဲဖွံ့ဖြိုးသောသူပုဂ္ဂိုလ်များခဲကြိုတင် highspeed အင်တာနက်လိင်စွဲဖြစ်လာလိမ့်မည်။ )
လိင်စွဲလမ်း / hypersexual ရောဂါအတှကျအထောကျအထားကိုအင်တာနက်ဂိမ်း Disorder (IGD) နဲ့တန်းတူဖြစ်တယ်, သေးလိင်စွဲချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်စဉ် IGD DSM-5 (အပိုင်း 3) တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ (YBOP နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘဲသိပ္ပံပညာအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအဖြစ်ကဒီရှုမြင်.)
အများပြည်သူကသူတို့အပြုအမူကိုအပြစ်လွတ်ဖို့အတွက်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုနေသူကိုမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုနာမည်ကြီးတွေနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ထားသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်စွဲအဆိုပါ DSM ထဲကထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (တစျဖနျ, က porn စွဲကနေလိင်စွဲခွဲခြားရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။)
YBOP ကဲ့သို့ Griffiths က“ ထိုကဲ့သို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအားကူညီခြင်းနှင့်ကုသခြင်းများမှလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများကိုစိတ်ရောဂါကုမ္ပဏီမှပိုမိုယုံကြည်သင့်သည်” (ဆိုလိုသည်မှာ DSM နှင့် WHO မှ) ကယုံကြည်သည်။
အပြည့်အဝစက္ကူဖို့ Link ကို
မာကုဃ Griffiths က
စိတ်ပညာဌာနခွဲ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Trent တက္ကသိုလ်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, ဗြိတိန်
အီးမေးလ်: မာကုဃ Griffiths က ([အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်])
အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ:2မတ် 2016 Doi: 10.1111 / add.13315
စွဲလမ်းမှု၏လေ့လာမှုအဘို့အ© 2016 Society က
keywords: အပြုအမူစွဲ; အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; အလွန်အကျွံလိင်; အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; လိင်စွဲလမ်း
တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲအဖြစ်လိင်စွဲလမ်း၏ပြဿနာအများကြီးအခြေအတင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်အပြုအမူစှဲများအတွက်အနည်းငယ်သာမျက်နှာတရားဝင်မှုရှိသည် ဖြစ်. , ဤအပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်ကိုပိုမိုအလေးပေးအင်တာနက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်လိုအပ်ပါသည်။
Kraus နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကို  တစ်ဦးအမူအကျင့် (ဆိုလိုသည်မှာ Non-ပစ္စည်းဥစ္စာ) စွဲလမ်းအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ခွဲခြားများအတွက်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားအခြေဆန်းစစ် CSB defining အတွက်ပြဿနာများအပါအဝင်ဧရိယာထဲမှာပြဿနာအများအပြားအများအပြားအရေးကြီးသောကိစ္စများနှင့်ပျေါလှငျ, ပေါ်ပေါက်များနှင့်ကြံ့ခိုင်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်း အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များ (epidemiological, longitudinal, neuropsychological, neurobiological, မျိုးဗီဇ, etc) ကနေ။ ငါအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်း (စသည်တို့ကိုလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယို-ဂိမ်း, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်း, လိင်, အလုပ်,) သို့ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအချို့အမျိုးအစားများကိုလိင်စွဲလမ်းအဖြစ်တနျးနိုင်စောဒကတက်ခဲ့ကြ, ထိုအပေါ်သို့ မူတည်. အသုံးပြုသောစွဲ၏အဓိပ်ပါယျ [2-5].
သို့သော် Kraus အတွက်ဒေသများရှိပါတယ် et alမည်သည့်ဝေဖန်အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲခေတ္တဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့။ ရဲ့စက္ကူ။ ဥပမာ, Co-ဖြစ်ပေါ် psychopathology နှင့် CSB ပေါ်တွင်အပိုင်းအတွက်ရည်ညွှန်း CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏ 4-20% ကိုလည်း disorders လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူဖော်ပြရန်ကြောင့်ဟုဆိုကာလေ့လာမှုများမှဖန်ဆင်းသည်။ တစ်ဦးကပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်  အလားအလာရှိသောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ ၁၁ ခုကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်လိင်စွဲမှုသည်လေ့ကျင့်ခန်းစွဲခြင်း (၈-၁၂%)၊ အလုပ်စွဲလမ်းမှု (၂၈-၃၄%) နှင့်စျေး ၀ ယ်ခြင်းစွဲလမ်းမှု (၅-၃၁%) တို့နှင့် တွဲဖက်၍ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည် (ဥပမာအားဖြင့်) ကိုကင်းနှင့်လိင်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းစွဲလမ်းစေနိုင်သော်လည်း (အပြုအမူနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်နိုင်သည်) သို့သော်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်အပြုအမူစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများရှိနေနိုင်သည်မှာနည်းပါးသည် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်များစွာစားသုံးသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်မှာတစ်စုံတစ် ဦး သည် (ဥပမာ) အလုပ်နှင့်လိင်ကိုအမှန်တကယ်စွဲလမ်းရန်မဖြစ်နိုင်သလောက် (လူ၏အလုပ်သည်အပြာစာပေရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၌သရုပ်ဆောင် / မင်းသမီးအဖြစ်မဟုတ်လျှင်) ဖြစ်သည်။
Kraus အားဖြင့်စက္ကူ et al ။ ထို့အပြင် '' အလွန်အကျွံ / ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ 'ကိုးကားတဲ့အရေအတွက်ကကို' 'အလွန်အကျွံ' 'အပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာပြဿနာ) မကောင်းတဲ့သောယူဆချက်လုပ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ CSB ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သူ့ဟာသူအတွက်အလွန်အကျွံလိင်သေချာပေါက်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှု၏ပမာဏထက်စွဲလမ်းအပြုအမူ defining မှာပိုအရေးကြီးသည်အဖြစ်စွဲစပ်လျဉ်းဆိုအပြုအမူနှင့်အတူအဆက်မပြတ်သိသာတဲ့အကောင့်ထဲသို့အမူအကျင့်အခြေအနေတွင်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်မစောဒကတက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့, ကျန်းမာအလွန်အကျွံစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားအခြေခံခြားနားချက်စှဲသူတို့ထံမှယူသော်လည်းကျန်းမာအလွန်အကျွံစိတ်အားထက်သန်မှု, အသက်ရှင်ခြင်းကိုထည့်သွင်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ။ အဆိုပါစက္ကူလည်းမျိုးရိုးဗီဇ / neurobiological ရှုထောင့်ကနေပင်ကိုယ်မူလသုတေသနပိုပြီးအလေးအနက်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေထက်ကုသသင့်ကြောင်းတစ်ခုနောက်ခံယူဆချက်ရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ CSB, လိင်စွဲလမ်းနှင့် / သို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောပုံမမှန်ပြုမူဆက်ဆံသူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ် ။ အကျိုးဆက်အားကူညီခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီပြုမူဆက်ဆံသောသူတို့အထဲကနေလက်တွေ့အထောက်အထားစိတ်ရောဂါအသိုင်းအဝိုင်းများက သာ. ကြီးမြတ်ယုံပေးထားရပါမည်။
ပွဲတစ်ပွဲအတွက် CSB ၏လယ်ပြင်နှင့်လိင်စွဲလမ်းအတွက်အရေးအပါဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအင်တာနက်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့် CSB ဆောင်ရွက်မှုတွေဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် [2, 8, 9]။ ဤသည်မှာနိဂုံးချုပ်အပိုဒ်အထိမဖော်ပြရသေးသော်လည်း ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်း မှစ၍ လူပေါင်း ၁၀,၀၀၀ နီးပါးအထိနမူနာအရွယ်အစားများအပါအ ၀ င်အွန်လိုင်းလိင်စွဲလမ်းမှု (ပင်ကိုယ်မူလအခြေခံအသေးများပါဝင်သည်) ကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။ [10-17]။ တကယ်တော့, အွန်လိုင်းလိင်စွဲလမ်းနှင့်ကုသမှုကိုရည်မှတ်ပင်ကိုယ်မူလအချက်အလက်များ၏မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များရှိခဲ့ပါပြီ [4, 5]။ ဤရွေ့ကားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (စသည်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်စွမ်း, တတ်နိုင်, အမည်ဝှက်, အဆင်ပြေစေရန်, ထွက်ပေါက်, disinhibition) မှစပ်လျဉ်းစွဲလမ်းသဘောထားတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်လှုံ့ဆော်စေခြင်းငှါအင်တာနက်များ၏အများအပြားတိကျတဲ့ features တွေဖော်ပြထားပါပြီ။ အင်တာနက်လည်းတစ်ဦးချင်းအော့ဖ်လိုင်း (ဥပမာ cybersexual ယောင်) တွင်ပါဝင်စိတ်ကူးဘယ်တော့မှမယ်လို့အပြုအမူတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ [2, 18].
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder (IGD) ကို DSM-5 (ပုဒ်မ 3) တွင်ထည့်သွင်းပေမယ့်လိင်စွဲလမ်း / hypersexual ရောဂါလိင်စွဲလမ်းများအတွက်ပင်ကိုယ်မူလအခြေစိုက်စခန်း IGD နဲ့တန်းတူအပေါ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ခံခဲ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့၏ပြဿနာလည်းမရှိ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဖောက်ပြန်တရားမျှတရန်ဆင်ခြေအဖြစ်က high-profile ကိုနာမည်ကြီးတွေအားဖြင့်ဝေါဟာရကို '' လိင်စွဲလမ်း '' မကြာခဏအသုံးပြုကြသည် (နှင့်အလွဲသုံးစား) ကြောင်းဖြစ်ပြီး '' functional ဖြစ်စေထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု '' ထက်နည်းနည်းပိုစေခြင်းငှါ, ။ သူတို့မယားသူတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားစဉ်ကအများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက်ဥပမာ, တချို့နာမည်ကြီးတွေလိင်တစ်ခုစွဲအခိုင်အမာပါပြီ။ သူတို့မယားထွက်မတွေ့ရှိဖူးလျှင်, ငါသည်ဤကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့လိင်စွဲခဲ့အခိုင်အမာကြမည်ဟုရှိမရှိသံသယ။ ငါအများကြီးနာမည်ကြီးတွေသူတို့တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာနှင့်အတူတရစပ်ကြသည်နှင့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်လိုရှိ၏ သူတို့ကအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့လျှင်မူကားလူမည်မျှတူညီအမှုကိုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်လော လူတစ်ဦးသစ္စာမဲ့ဖြစ်ရပြီတွေ့သောအခါလိင်သာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာ (နှင့် pathologized ဖြစ်ပါတယ်) ။ ထိုသို့သောဥပမာပွဲတစ်ပွဲလိင်စွဲလမ်းနေတဲ့ '' မကောင်းတဲ့အမည်ဖြင့် '' အပ်သဖြင့်, ရောဂါရှာဖွေ Psychiatry ကျမ်းထိုသို့သောအပြုအမူများပါဝင်သည်လိုသောမဟုတ်သူတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ပေးသည်။
လူငယ်များအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းပညာရေး၏ဧရိယာ, Trust မှ, ထိုလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းထံမှအလှူငွေများပေါ်အခြေခံပြီးက၎င်း၏သုတေသနအစီအစဉ်ရန်ပုံငွေသူတစ်ဦးကုသိုလ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်လောင်းကစားအတွက်တာဝန်ယူမှုအနေဖြင့်လောင်းကစားနှင့်လောင်းကစားကုသမှုလူမှုရေးတာဝန်ယူမှု။ စာရေးသူလည်းလောင်းကစားအတွက်လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု၏ဧရိယာ၌အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းကုမ္ပဏီများအတွက်အကြံပေးမှုများလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
1 - Kraus အက်စ်, Voon V., Potenza အမ် တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော စှဲမွဲမှု 2016; Doi: 10.1111 / add.13297.
PDF ဖိုင် (346K)
2 - Griffiths က MD အင်တာနက်အပေါ်လိင်: လိင်စွဲလမ်းများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်. J ကိုလိင် Res 2001; 38: 333-42.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 72
3 - Griffiths က MD အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနသုံးသပ်ချက်. စှဲလမျးသူ Res သီအိုရီ 2012; 20: 111-24.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 26
4 - Dhuffar အမ်, Griffiths က MD ဖှဲ့အကဲဖြတ်သုံးပြီးတစ်ဦးကအွန်လိုင်းလိင်စွဲစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်လက်တွေ့ကုသ. Curr စွဲကိုယ်စားလှယ် 2015; 2: 163-74.
5 - Sussman အက်စ်, Lisha N., Griffiths ကအမ် အဆိုပါစှဲဃပျံ့နှံ့နေတဲ့: အများစု၏ပြဿနာတစ်ခုသို့မဟုတ်လူနည်းစု? Eval ကျန်းမာရေးပါမောက္ခ 2011; 34: 3-56.
6 - Griffiths က MD တစ်ဦး biopsychosocial မူဘောင်အတွင်းစွဲ၏တစ်ဦးက '' အစိတ်အပိုင်းများ '' မော်ဒယ်. J ကို Subst အသုံးပြုခြင်း 2005; 10: 191-7.
7 - Griffiths က MD, Dhuffar အမ် ဗြိတိသျှအမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကုသ. int J ကို Ment ကနျြးမာရေးစွဲ 2014; 12: 561-71.
8 - Griffiths က MD အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ဂယက်ရိုက်. Cyberpsychol ပြုမူနေ 2000; 3: 537-52.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 41
9 - Orzack MH, Ross က CJ ကို virtual လိင်ကတခြားလိင်စှဲနဲ့တူဆကျဆံခံရသငျ့သလော လိင်စွဲ compulsive 2000; 7: 113-25.
10 - Cooper ကအေ, Delmonico DL, Burg R. ဘာသုံးစွဲသူများချိုးဖောက်မှုများ, နှင့် compulsive: အသစ်ကတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်. လိင်စွဲ compulsive 2000; 6: 79-104.
11 - Cooper ကအေ, Delmonico DL, Griffin-Shelley အီး, Mathis RM အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု: အလားအလာပြဿနာအပြုအမူတွေတစ်ခုစာမေးပွဲ. လိင်စွဲ compulsive 2004; 11: 129-43.
12 - Cooper ကအေ, Galbreath N., Becker ကနေ MA အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်: အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူယောက်ျား၏ကျနော်တို့ရဲ့နားလည်မှု furthering. Psychol စွဲပြုမူနေ 2004; 18: 223-30.
13 - Cooper ကအေ, Griffin-Shelley အီး, Delmonico DL, Mathis RM အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ: အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် variable တွေကို. လိင်စွဲ compulsive 2001; 8: 267-85.
14 - Stein DJ သမား, Black က DW, Shapira NA, Spitzer RL အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းနှင့်အတူ Hypersexual ရောဂါနှင့်အဆက်မပြတ်. နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2001; 158: 1590-4.
15 - Schneider JP မိသားစုအပေါ်ကျဘာစွဲ၏ဆိုးကျိုးများ: စစ်တမ်းတစ်ခု၏ရလဒ်များကို. လိင်စွဲ compulsive 2000; 7: 31-58.
16 - Schneider JP ဘာပါဝင်သူတစ်ဦးအရည်အသွေးလေ့လာမှု: ကျားမကွဲပြားမှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များကိုနှင့်ကုသမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်. လိင်စွဲ compulsive 2000; 7: 249-78.
17 - Schneider JP မိသားစုအပေါ် compulsive ကျဘာအပြုအမူတွေ၏သက်ရောက်မှု. လိင်ဆက်ဆံရေး Ther 2001; 18: 329-54.
18 - Bocij P., Griffiths က MD, McFarlane L. Cyberstalking: ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအသစ်တခုစိန်ခေါ်မှု. ပြစ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေ 2002; 122: 3-5.
19 - ဒေးဗီးစ် JB စွဲလမ်းမှု၏ဒဏ်ဍာရီ. စာဖတ်ခြင်း: Harwood ပညာရေးဆိုင်ရာထုတ်ဝေ; 1992.
လေ့လာမှု 40 ကျော်သည် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု/ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်စေပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအား လျော့နည်းစေကြောင်း သင်သိပါသလား။ t.co/3zEhTDAold